အနှောက်ယှက်ပေးတဲ့ internet သရဲများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အနှောက်ယှက်ပေးတဲ့ internet သရဲများ
အနှောက်ယှက်ပေးတဲ့ internet သရဲများ
Posted by etone on Jan 27, 2011 in My Dear Diary | 16 comments
ဒီနေ့မနက်ရုံးရောက်ရောက်ချင်း အီးမေလ်းတောင် မစစ်ခင် လုပ်နေကြ အတိုင်း မန္တလေးဂေဇက်ကို စဖွင့်တယ်ပေါ့…။
ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကြောင့် မျက်လုံးပြူးသွားတယ် ..ဒါမျိုးတွေလည်း ဖြစ်တတ်တာပေကိုး ။ အင်တာနက်မှ ဇာတ်လမ်းတွေ အကြောင်းပါ ။ သုံးတတ်လျှင် တော်တော်အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ အင်တာနက်ကို လွဲမှားစွာ အသုံး ပြုပြီး လမ်းမှားရောက်နေတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး ။ ခံယူချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ သုံးနေကြပေမဲ့ … အများစုကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ အချိန်သာဖြန်းချင်ဖြုန်းမယ် သူများကို အနှောက်ယှက် မပေးတတ်ကြပါဘူး ။
ကျမအခုပြောပြချင်တာက အလေနတော အင်တာနက်သရဲတွေအကြောင်းပါ …။ ကျမ ၂၀၀၆ ကတည်းက အင်တာနက်စသုံးဖြစ်ပါတယ်… ။ အလုပ်စ ၀င်လုပ်ရင်း အင်တာနက်ကို ကလိရင်း သုံးတတ်ခဲ့တာပါ ။ နောက်တော့ အဲ့ဒီက တစ်ဆင့် ဂျီးမေးလ်း ၊ vzo ၊ friendster စတာတွေ သုံးတတ်လာပါတယ်…။ ကျမဆီဝင်လာတဲ့ အင်ဗိုက်တိုင်းကိုလည်း အကုန်လုံး accept လုပ်တယ်ပေါ့.. ။ စူးစမ်းချင်တာလေ ဒါနဲ့ ချက်တင်က conversation တွေလုပ်ပါတယ် … ။ အများစုကတော့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပါပဲ …။ နေကောင်းလား ၊ ဘယ်ကလဲ ဘာညာပေါ့ … ။ အင်တာနက်ထဲက တွေ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေတောင် အခုထိ ကျမတို့ အဆက်သွယ်ရှိနေတုန်းပါ … ။ ချက်တင်စသုံးတတ်ခါစကတော့ ဒီလို စကားရောဖောရောတွေလုပ်ရတာ ပျော်တယ်ပေါ့… ။ ကြာလာတော့ အထူးဆန်းမဟုတ်တော့ အာရှီးမလုပ်တော့ပါဘူး ။ အလုပ်လုပ်လိုက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ရင် တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းလောက်ပြောလိုက်နဲ့ပေါ့ … gtalk သုံးပြီးပြောတာ အလုပ်အတွက်ပါအသုံးဝင်လို့ တရားဝန်သုံးခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။ official ကိစ္စတွေအတွက် မေးလ်ပို့မေးရင် ကြာလို့ တဘက်လူကို ချက်တင်ကနေပဲ မေးလိုက်၊ ဖြေလိုက်နဲ့ အချိန်တွေ တစ်စစ ကုန်လာတယ်ပေါ့ …။
၂၀၁၀/၂၀၁၁ ကိုရောက်လာတော့ သိသိသာသာကြီးကို အလုပ်များလာတယ် …။ သူများတွေ လာနှုတ်ဆက်တာတောင် တစ်ခါတစ်ခါ idle ပြထားရတဲ့ အနေထားမျိုးပေါ့…။ ပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းက google group လေးတွေ ခေတ်စားလာတယ် ။ ဂရုဖွဲ့ပြီး ပို့စ်အသစ်တင်တိုင်း စာပို့တယ်ပေါ့… အဲ့ဒီကနေ … အီးမေးလ် လိပ်စာတွေသိပြီး ကိုယ့် gtalk contact list ထဲကို ဘာမှန်းမသိ ၊ ညာမှန်းမသိ လူတွေရောက်လာပါရော… တစ်ချို့ကတော့ အလုပ်များနေလို့ ဆောရီးပဲ ပြောလိုက်လျှင် လာ မပြောတော့ပေမဲ့.. တစ်ချို့က အလုပ်များနေတယ်ပြောတာကို အိုက်တင်ခံပြီး လာဆဲတာတွေရှိပါတယ်… ။ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတော့ …ယောကျာ်းနာမည် နဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက် တစ်ကြောင်းလာရိုက်တယ် … xီး ပဲတဲ့ … ။ ကျမ ဖက်စ်ပို့နေတုန်းရိုက်တာမို့ ပြန်ရိုက်ခွင့်မသာခဲ့ပါဘူး…။ ပြီးတော့သူက အရင် ဘလော့သွားတယ်…စိတ်တိုလိုက်တာနော် အရေမရအဖတ်မရသူများ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်အောင် အားအားယားယား အရိုင်းစိုင်း အသုံးနှုံးတွေ သုံးတာ မိကောင်းဖခင်သားသမီးမဖြစ်လောက်ပါဘူး ။ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ဗရန်းဗတာမျိုးရိုးပဲ နေပါစေ ပြန်မပြောတောဘူးဆိုပြီး ဘယ်ကမှန်းမသိရောက်လာတဲ့ သူ့အကောင့်ကို အပြီး ဒလိလိုက်ပါတော့တယ်….။
သူ့အကောင့်ကတော့… LordsArths@gmail.com ပါပဲ ။
ဒီနေ့ နေ့ခင်းက အလုပ်အတူတူလုပ်တဲ့ အစ်မတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်…။ everwanted.pusy@gmail.com နဲ့ nyeinchanaung1234@gmail.com ချက်တင်ကနေ nick နှစ်ခုနဲ့ ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်းတွေပြောနေပါတယ်တဲ့… ။ အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေ ပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး ။ တည်းခိုခန်းသွားမလား ဘာညာတွေလာရိုက်တယ် … အဲ့ဒီအစ်မကလည်း ခုံမှာမရှိတဲ့အချိန်ဆိုတော့ …. တခြားလူတွေ သူ့စက်မှာလာဖတ်တာပေါ့ သူလည်း တော်တော် ရှက်သွားတယ် ။ မသိရင် အဲ့ဒီအစ်မနဲ့ ဟိုဘက်က ကောင်နဲ့ ဘာညာပြောနေတယ်ထင်စရာပဲ … ။ မိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေဆိုလျှင် ဒီလို အပြုမူ ၊အပြောဆိုမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး ။ အခုဟာက သက်သက်နှောက်ယှက်သလိုဖြစ်နေပါပြီ ။ အင်တာနက်မို့ ရုပ်မမြင်ရဘူးပဲထားစေဦးတော့ သူများကို နှောက်ယှက်လိုက်လို့ တစ်ဖက်လူ လိပ်ပြာသန့်သန့်နေနိုင်ပါ့မလား … အပျင်းပြေ နှောက်ယှက်လို့ အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းတာလည်း မဟုတ် … ။သတ်သတ်ညစ်ညမ်းတဲ့ အကြောင်းတွေ ပြုမူပြောဆိုမဲ့အစား မိမိဘ၀ တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း ရှာသင့်တယ်လေ ။ သိမ်ဖျင်းတဲ့ အကျင့်တွေနဲ့ ဆက်သွားနေလို့ကတော့ လူစဉ်တောင် မီမယ် မထင်တော့ဘူး … သူတို့ကိုယ်တိုင်က ကြက်ခေါင်းလုပ်ပြီး အသက်မွေးမယ်လို့များ မှတ်ထားလေရော့သလား မပြောတတ်တော့ဘူး ….။ ရွာသူ၊ ရွာသားများအားလုံးလဲ အင်တာနက်သရဲတွေ နှောက်ယှက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးပါစေနော် ။ ။
ကြည့်ရတာ .. အင်တာနက်သရဲတွေအတွက် .. Blacklist စာရင်းလုပ်ပေးရတော့မယ်နဲ့တူတယ်..။
ယူအက်စ်မှာတော့ .. Blacklistစာရင်း..စပန်းမေးလ်ပို့ တဲ့ဆာဗာစာ၇င်း စသဖြင့်ရှိတယ်..။
မြန်မာပြည်အတွက် သီးသန့် စာရင်းလုပ်ကြည့်မလား..။ ဥပမာ.. မနှစ်သက်တဲ့သူရှိရင် .. မှတ်ချက်နဲ့တကွ ..အီးမေးလ်အကောင့်ကို .. ဒီမှာလာတင်တာမျိုးပေါ့..။
ဗရုတ်သုက္ခ ကောင်တွေအတွက် လုပ်ပေးစမ်းပါ သူကြီးရာ..ကုသိုလ်ရမှာ..
တစ်ယောက်ပြောသလိုပေါ့၊ တို့ကတော့ခပ်ရင့်ရင့်ပဲ၊ ကြည်မရရင် ဘလော့ခ်လိုက်…. Don’t Care ပဲ ဆို သလိုပဲ လုပ်ကြပေါ့ အစ်မရေ….
စကား တခွန်း နှစ်ခွန်း ပြောလိုက်တယ် ပြီးရင် မအားဘူး ပြောလိုက်တယ်။ အလုပ်လာ မရှုပ်ရင် ကိစ္စမရှိဘူး သိပ်ပြီး ရစ်လွန်းရင် စကားများများ မပြောဘူး ဘလော့တာဘဲ။ သိပ်ပြီး တွေးမနေဘူး။ ကိုယ်ကိစ္စနဲ့ ကိုယ်တောင် ခေါင်းရှုပ်ရတဲ့ အထဲ သူများ အကြောင်းတွေးပြီး ခေါင်းမရှုပ်နိင်ဘူး။ ညောင်းဘဲ…
မနောလည်း ခံရဖူးတယ်။ ဘယ်သူမှ စကားမပြောဖြစ်တော့ မိုက်ရိုင်းဆဲဆိုတာတွေလည်း အတော်ကြုံ၇တယ်။
အော် ဒါ များ တစ် ခါ ပဲ ခံ ပေါ့ … ပြီး ရင် block လိုက် ပါ. ဗျာ …
အင်းဟုတ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော့ကို ဆိုရင်အဲ့အကောင့်တွေတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ zawkokoaung18@gmail.com ဆိုတဲ့ အကောင့်က ကျွန်တော်ပါလို့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကျွန်တော့ဓာတ်ပုံကို ကူးသွားပြီးတော့…လိုက်မိတ်ဆက်တယ်…။ပြီးတော့ လိုက်ဆဲတယ်ဗျာ…။ကျွန်တော့
မိတ်ဆွေတွေ အားလုံးကို မိတ်ပျက်အောင်လုပ်တယ်တဲ့ ဆိုပါတော့ဗျာ…ဆဲလိုက်တာမှ ရစရာကိုမရှိဘူး…။အခုတောင်မှ ကံကောင်းလို့ သူငယ်ချင်းတယောက်က ဒီကိစ္စတွေကို ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူလိုက်ရှင်းပေးလို့…နည်းနည်းတော့ မိတ်ဆွေတွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ နားလည်ပေးလာ
တယ်လေ…အချို့သော လူတွေကတော့..ဘယ်လိုမှကို ပြောလို့မရတော့ဘူး…ဒီကိစ္စကို ကျွန်တော်တို့
ဘယ်လိုတွေ ကာကွယ်ရင်ကောင်းမလည်းဆိုတာကို စဉ်းစားစေချင်တယ်ဗျာ….။
ဟုတ်တယ်ဗျ – အဆဲခံရတဲ့ အထဲ မှာ ကျနော်လည်း ပါတယ် – နာမည်မေး တာ မပြောလို့တဲ့ ဗျာ – အဲတော့ ဆဲရော ကျနော်က မင်းအဲလိုပဲ အမြဲ ရိုင်းရိုင်းစိုင်း အမြဲ ပြောလေ့ရှိသလားလို့မေး လိုက်တယ်လေ – ရိုင်းတယ်ဗျာတဲ့ ရိုင်းတော့ ဘာဖြစ်လဲ တဲ့ ထပ်တောင်မှာ ဆဲလိုက်သေးတယ် – အဲတော့ ငါ မင်း လိုရိုင်းစိုင်း တဲ့ သူနဲ့ ဆက်ဆံလေ့ မရှိဘူး မင်း ကို Block လုပ်ပါရစေ မင်း စိတ်မဆိုးပါနဲ့ လို့ အချိုဆုံးပြောပီး အပီး Del; လိုက်တယ်လေ -အကောင့် ကိုတော့ မှတ်မထားလိုက်တော့ ဘူး – ဘ၀တိုးတက်ဖို့ မပါ တာအဲ့ လိုလူမျိုးတွေ ထင်ပါရဲ့ —–
တော်တော်ဆိုးတာပဲ ယုကတော့မကြုံဖူးဘူး ကိုယ်သိတဲ့သူကလွဲလို့ ဘယ်သူကိုမှ accept မလုပ်ဘူး ယောကျာ်းလေးဆိုပိုဆိုးသေးတယ် အခု MG မှာသိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေလောက်ပဲ accept လုပ်တာ သူကြီးပြောတာကောင်းတယ်နော် မြန်မြန်အကောင်အထည်ဖော်ပါသူကြီးရယ်
ဒီကိစ္စက အင်တာနက်သုံးတဲ့သူ တော်တော်များများကြုံတွေ့ရတက်ပါတယ် . နွယ်ပင်လဲ အဲလိုပြောတာမျိုးကြုံခဲံရဖူးတယ် ကိုယ်က အလုပ်နဲ့ မအားတော့ ပြန်မပြောဖြစ်ဘူးပေါ့ အဲတာကို တဖက်က ဆဲသွားဘူးတယ် သူတို့အတွက်တော့ အဲလိုလုပ်ရတာ ဘာအကျိုးအမြတ်ရလဲတော့ မသိဘူး . အခုတော့ မသိတဲ့သူဆို accept မလုပ်တော့ဘူး ခေါင်းရှုပ်မခံနိုင်လို့ ….
နာမည်တခုကြားဖူးတာ မိုက်တဲ့ဂျော်နီအောင်ဘု ဆိုလားပဲ။ သူနဲ့ခပ်ဆင်ဆင် တယောက်လည်း ရွာထဲမှာရှိတယ်။ စိတ်ချရအောင် နာမည်အသံထွက် ဆင်တူတွေပါ ဖော်ပြပေးပါ။
အခုလောလောဆယ်တော့တယောက်ပြောမယ်arlardin1992@gmail.com သူကကျွန်တော့်ကိုလာadd
ပီးတော့ဖုန်းခေါ်တယ်တယ် ကျွန်တော်ကပြန်လည်းပြောရော ကျွန်တော့ကိုဆဲပါလေရော…….။
အဲ့လိုလူတွေအားကြီးပဲ ကျနော့်ဘလော့စာရင်းမှာလဲလူတွေပြည့်နေပီ မိန်းကလေးတွေသတိထားကြပါ ရုံးမှာသုံးရတဲ့လူတွေ ပိုဆိုးပါတယ် တချို့ ဆိုတော်တော်ညစ်ညမ်းတာတွေဆဲတာဗျ အကောင့်မှာလူမရှိရင်တော့ အရှက်ကွဲပီပဲ ပီးတော့ရှိသေးတယ် ပြည်ပဆိုက်တွေထဲစပ်စုတတ်တဲ့မမတွေ အထူးသတိထားကြပါဂျာ………..